रूसी भाषामा Prepositions छ बोलीको आधिकारिक भाग। नियम, तिनीहरूले nouns अगाडि खडा र के भने थियो को अर्थ स्पष्ट। यी त्रुटिहरु एकीकृत राज्य परीक्षा धेरै साधारण हुन्, विशेषण र nouns देखि prepositions भेद गर्न सक्षम हुन महत्त्वपूर्ण छ।
मा रूसी Prepositions: वर्गीकरण
Prepositions यो आवश्यक छ भनेर थाह, आफ्नै जटिल वर्गीकरण छ। तसर्थ, वर्गीकरण छैन पनि एक हो। सबैभन्दा सरल - मूल को एक विभाजन: रूसी भाषा prepositions व्युत्पन्न छन् (को sequel मा, अनुसार धन्यवाद), र (मा कारण) गैर-व्युत्पन्न। व्युत्पन्न prepositions अक्सर nouns संग भ्रमित। पनि लिखित पत्र -E- prepositions को अन्त मा त्यो भूल छैन: एक घण्टा भित्र, तर नदी को पाठ्यक्रम भन्दा, एक महिना को पाठ्यक्रम मा, तर कथा को लडी मा। को prepositions यस भाग धेरै गाह्रो छ र सामान्यतया विद्यार्थीहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो कठिनाई हुन्छ। रूसी भाषामा सबै बहाना विभाजित र थप एक सुविधा सकिन्छ: मान। यसलाई बोली को सहायक भाग एक वाक्य वा वाक्यांश शब्दहरू को सम्बन्ध हेर्न मदत गर्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। यसरी, रूसी भाषामा prepositions अर्थात् स्थान (उदाहरणका लागि, एउटा रूखमुनि, सडक नजिकै, तालिका वरिपरि, को कुर्सी अन्तर्गत) संकेत, स्थानिक हुन सक्छ। prepositions, अस्थायी पनि हो अर्थात् समय अवधि संकेत (उदाहरणका लागि, आधा घण्टा, गत महिनाको लागि, साँझ सम्म, एक वर्ष पछि, पाँच घण्टा गर्छन)।
अर्को वस्तु वर्गीकरण त्यसैले (कारण वर्षा, हावा डर गर्न, कारण रोग, कारण घटनाहरु जस्तै,) परिभाषित वा कारण संकेत जो causal prepositions छन्। चौथो डिभिजन कि लक्ष्य हो, लक्ष्य मा इशारा, prepositions सकिन्छ। यी परंपरागत, (उदाहरणका लागि, को fatherland को फाइदाको लागि मातृभूमि को लागि, आफ्नो भाइ को खातिर, को लागि एक बाँकी रोक्न) गर्न को लागि बहाना समावेश। को अंत सित अनुच्छेद तरिका को prepositions सकिन्छ, तिनीहरूले नै प्रकार, बिन्दु को बोलियों जस्तै हो, र छवि र भावनात्मक रंग कार्य एक प्रकारको प्रतिनिधित्व: उदाहरणका लागि, गल्ती बिना बोल्न, खुशी साथ काम। र अन्तिम बिन्दु वर्गीकरण - थप prepositions। तिनीहरूले केही कार्य पठाइएको जो संकेतक विषयको छन्। उदाहरणका लागि, भूगोल मा परीक्षा पास गर्न, छुट्टी बारेमा बताउन प्रतिज्ञालाई बारेमा बिर्सन्छन्। सबै वर्तमान घटनाहरूको प्रसङ्ग निर्भर देखि यो नै क्षमा गर्नुहोस फरक अर्थ मा कार्य गर्न सक्छन् टिप्पण लायक छ। एक prepositions छैनन् भनेर बिर्सनु हुँदैन पनि प्रस्ताव को सदस्य, तर आफ्नो संरचना समावेश। उदाहरणका लागि, वाक्यांश वाक्यमा "पूर्व-खाने" भन्ने तथ्यलाई (संज्ञा + निपात) हुनेछ "खाने अघि, म पुस्तक पढ्न"।
रूसी भाषामा Prepositions धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तिनीहरूले समय निर्धारण, सम्बन्ध व्यक्त, घटना को कारण गर्न लक्ष्य र बिन्दु संकेत गर्छ। रूपमा सकल त्रुटिहरू एक सम्पूर्ण वाक्यको अर्थ विकृत हुन सक्छ, prepositions र लेखन को आफ्नो नियमहरू को वर्गीकरण हरेक व्यक्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छ थाहा छ।
यसको शर्ट शरीर नजिक छ? एक विदेशी भाषाको रूपमा रूसी
रोमान्श् भाषा: कति चाँडो सिक्न?
Subjunctive झुकाव - यो छ ... बोलीको भाग - क्रिया। Subjunctive - उदाहरणहरू
अपार्टमेंट को निजीकरण - को कागजात र प्रक्रिया अन्य nuances
उज्ज्वल छुट्टी - परिवार को अन्तर्राष्ट्रिय दिवस
Aleksandr Aleksandrovich Bushkov लेखक: जीवनी, पुस्तकहरू
छोराछोरीको अस्थमा कस्तो छ?
को हलोजेन के हो? रासायनिक तत्व फ्लोरिन, क्लोरिन, आयोडिन र क्षारिय
Ghee - घिउ। आयुर्वेदिक पकाउने
टाइल बिछाउने लागि उपकरण। आधारभूत उपकरण सूची
Viscose के छ: प्रश्नहरूको जवाफ